भियतनाममा 54 XNUMX वंशीय समूहहरूको BRAU समुदाय - भियतनाम अध्ययनको पवित्र भूमि
BRAU BRAO पनि भनिन्छ। तिनीहरूसँग करीव 350 of० को जनसंख्या छ जो मुख्य रूपमा बसोबास गर्छन् डाक मलाई गाउँ, केटा Commune, Ngoc Hoi जिल्ला of कोन टर्न प्रान्त1। BRAU भाषा सोम-खमेरको हो2 समूह।
तिनीहरूको एनिमिसमको अवधारणाहरूमा, पीए XAY ब्रह्माण्ड, स्वर्ग, पृथ्वी, नदी, धारा, वर्षा, हावा, मानव र मृत्युको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ।
BRAU एक लामो समय को लागी एक घुमन्ते जीवन को नेतृत्व गरेको छ। उनीहरु धान, कॉम र क्यासावा उब्जाउन स्लाश र बम खेतीको अभ्यास गर्छन्, कुखुरा, चक्कु र लाठी जस्ता प्राथमिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर प्वालमा बीज राख्नको लागि प्वालहरू। यसैले तिनीहरू सँधै कम उत्पादकता पाउँछन्। सामान्यतया उनीहरूको घरहरू स्टिल्टहरूमा बनाइन्छ।
सामान्यतया, पुरुषहरूले कम्मरको लुगा लगाउँदछन् र महिला लुगिस। सबै आफ्नो upoer torsos नग्न छोड्छन्। भन्सार अनुसार, BRAU मा आफ्नो अनुहार र शरीर टैटू र दाँत दायर छ। महिलाले आफ्नो पाखुरा, गोडाहरू र घाँटी वरिपरि धेरै चेन लगाउँदछन्। उनीहरूले हस्तिहाड वा बाँसबाट बनेको ठूलो इयर-रिंग पनि लगाउँछन्।
युवा पुरुष र महिलाहरू आफ्नो पार्टनर छनौट गर्न स्वतन्त्र छन्। एक विवाहित मानिसका परिवारले दुलहीको परिवारलाई विवाह समारोह प्रस्तुत गर्दछ जहाँ विवाह समारोह आयोजना गरिनेछ। विवाह पछि, दुलहा आफ्नी पत्नी र बच्चाहरु लाई घरमा ल्याउनु भन्दा पहिले २- 2-3 बर्ष पत्नीको परिवारसँग बस्नु पर्छ।
यो परम्परागत छ कि मृत व्यक्तिलाई तुरुन्तै घरको बाहिर ल्याइन्छ, खोक्रो रूखको खोपले बनेको ताबूतमा राखिन्छ। यो ताबूत गाउँलेहरूले निर्माण गरेको अस्थायी घरमा छोडिनेछ। सबै व्यक्तिहरू आ-आफ्नो शोकको प्रस्ताव राख्न आउँदछन् र घौंहरू खेल्छन्। केही दिन पछि, शव गाडिएको छ। जार, बास्केट, चाकू र कुहुराहरू जस्ता सबै वस्तुहरू मृतकका लागि चिहानमा छोडिएका छन्।
BRAU gouts खेल्न मनपराउँदछ3 र परम्परागत संगीत वाद्ययंत्र। Gongs विभिन्न प्रकारको शामिल। विशेष रूपमा, दुई gouts को एक सेट (भनिन्छ chieng था) ०-30० भैंसेको मान छ। जवान केटीहरू अक्सर खेल्छन् Klong put4, एउटा वाद्ययन्त्रमा 5--7 बाँस ट्यूबहरू हुन्छन्, लामो र छोटो जोसँगै जोडिएका छन्। आवाज तब आउँदछ जब हवालाई ट्यालीमा जोडले ताली बजाउँदछ। BRAU सँग उचित लोभ धुनहरू बच्चाहरूलाई लुकाउन वा विवाह समारोहहरूमा गाउन प्रयोग गरिन्छ। पतंग उडान स्टिल्टहरू र फेथमा हिड्दै5 एक युवा व्यक्तिको मनोरन्जन खेल्दै।
डाक मीमा ब्राउनको हेमलेट (स्रोत: थाong्ग ट्यान पब्लिशिंग हाउस)
◊ भियतनामी संस्करण (vi-VersiGoo): Nguoi BA NA ट्रong्ग क Cong्ग दong्ग 54 Dan दान toc anh em o भियतनाम.
◊ भियतनामी संस्करण (vi-VersiGoo): Nguoi BO Y ट्रोंग कंग डो 54 Dan Dan दान toc anh em o भियतनाम.
◊ भियतनामी संस्करण (vi-VersiGoo): Nguoi BRAU ट्राँग क d्ग दong्ग 54 XNUMX दान toc anh em o भियतनाम.
◊ भियतनामी संस्करण (vi-VersiGoo): Nguoi BRU-VAN KIEU ट्राँग क d्ग डong 54 Dan Dan दान toc anh Em o Viet Nam.
(देखिएको 26 पटक, 1 आज भ्रमणमा)
पोस्ट दृश्यहरू: 109
← भियतनाममा E 54 जातीय समूहहरूको BO Y समुदाय
BRU-VAN KIEU भियतनाममा E 54 जातीय समूहहरूको समुदाय →
PROVIDENT PEPLE का कन्सर्न्स - Pण भुक्तानीको लागि CONCERN
टिप्पणीहरू बन्द PROVIDENT PEPLE को सम्वन्धमा - Pण भुक्तानीका लागि कन्कर्न
TERM "TẾT" को हस्ताक्षर
टिप्पणीहरू बन्द TERM "TẾT" को हस्ताक्षरमा
ला COCHINCHINE - परिचय
टिप्पणीहरू बन्द LA COCHINCHINE - परिचय
पारंपरिक VIETNAMESE मार्शल आर्ट्स - सेक्सन 1 को सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन गर्ने प्रयास
टिप्पणीहरू बन्द भियतनामी TET CA मा
VIETNAMESE भाषा भियतनामी र विदेशीहरूका लागि ... (287)
भियतनाममा E 54 जातीय समूहहरूको PHU LA समुदाय
टिप्पणीहरू बन्द भियतनाममा U 54 जातीय समूहहरूको PHU ला समुदायमा
टिप्पणीहरू बन्द TET को बखत WARD OF WICD OF WICD OF WARD OF WEAR को बारे सल्लाह दिईएकोमा
भियतनाममा A 54 जातीय समूहहरूको PA THEN समुदाय
टिप्पणीहरू बन्द भियतनाममा A 54 जातीय समूहहरूको PA THEN समुदायमा
क्विन गर्नुहोस् - मित्रताको कथा
टिप्पणीहरू बन्द मा क्विन - मित्रताको कथा
आजको भ्रमण: 794
अन्तिम7दिन भ्रमणहरू: 7,864
कुल भ्रमण: 82,396